Goobaha Kubadda Cagta ee Faransiiska ah - Codes-ka Online Casino Bonus
Casino Online Xeerarka Bonus > Goobaha Isboortiga Faransiiska Online
(234 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Loading ...Si cajiib leh, Paris iyo hareeraheeda ku xeeran ma jiro khamaar. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in sharciga Faransiiska ee hadda, casinos lagu meelayn karo oo keliya meelaha si rasmi ah u hela xaalada munaasabadda waxayna ka socotaa Paris, meel fog oo ka marta 100. Waxa kaliya ee laga reebo khadka casaan ee Engen. Meelaha munaasabadani waxay ku taal 14 km oo ka timid Champs Elysées. Isboortiga furan ee Engen-les-Bains wuxuu ku jiray 1901. 10 sano ka dib, waxa uu ahaa masraxa loo furay, iyo wakhti cisbitaal ayaa halkaan ku sugnaa. 1988 waxaa soo iibsaday Groupe Lucien Barrière. 2001 dhismaha ayaa si dhammeystiran loo dhisay, iyo casino cusub oo la furay April 2002. Casriga casriga waxaa loo qorsheeyay qaabka caanka ah Jacques Garcia. Wuxuu qurxiyey ilaha dhalaalaya dhalada, saqafka xiddigaha, harada iyo qurxinta raaxada leh. Ilaa hadda, aasaas khamaar oo ku yaala Engen - khadka ugu wayn ee Faransiiska. Waxay leedahay jadwal loogu talagalay poker stud, blackjack, iyo sidoo kale Ingiriis iyo Roulette Faransiis iyo ciyaaraha kale. Waxaa sidoo kale jira mashiinno dhejis ah.
Liiska Saacadaha 10 Faransiiska Online Casino
Makiinadaha gawaarida ee casinos ee Engen-les-Bains
Aasaaskii hore ee khamaarka ee Faransiiska waxa loo furay Faransiiska ee qarnigii XYX. Dhacdadani waxay door muhiim ah ka ciyaartay horumarinta warshadaha khamaarka, ma ahan oo keliya Faransiiska laakiin adduunka oo dhan. Marka hore, khamaarka waa hab lagu buuxiyo hantida dawladda, faa'iidada dhaqaale ee ka jirta jiritaanka hay'adahan ayaa cad, sidaa darteed, waxay bilaabeen inay soo muuqdaan casino cusub. Kadib Kacdoonka Faransiiska, casabiga waa la mamnuucay, ka dibna caan ah. Ciyaartoyda ugu horreeya ee casino waxay cayaari karaan oo kaliya tiro xadidan oo khamaar iyo roulette ah, laakin horumarinta shirkadda khamaarka ayaa ballaarisay noocyada khamaarka la bixiyo. By habka, hadda ku roulette caan ah sida la been abuuray, sida laga soo xigtay taariikhyahanada ugu badan, waxay ahayd in France. Mabda'a ujeedada Blaise Pascal, falsafada, iyo xisaabta kuwaas oo ka shaqeeya abuurista dhaqdhaqaaqa aan caadiga ahayn.
Maanta dalka Faransiiska waxaa jira shan kooxood, oo ka mid ah casino ugu weyn dalka:
- Kooxda Lucien Barrière;
- Qaybta "Qaybta";
- Joa Joao "Joao";
- Ganacsade "Transhan".
Casino "Barrièrede Deauville"
Qaar ka mid ah hay'adahaas waxaa ka mid ah Barrièrede Deauville, oo ku yaal magaalada Deauville. Taariikhda khadadkan waxaa ku dhawaad ​​sanado 150 ah. Waxaa laga helay 1864, wuxuu ahaa abaabulaha Duc de Morny, laakiin ganacsiga cas cas oo ahaa mid xun oo la xiray. Soo-helitaanka cusub ee machadkan ayaa horayba uga dhacay 1912. Waxaa loo dhisay dhisme cusub ee dhaqanka Athenian dhismaha, dhismahan wuxuu ku yaalaa hadda. Casino waxay noqotay meel lagu jecel yahay kiriimka bulshada Faransiiska iyo Ingiriiska, sidoo kale ganacsato iyo dad caan ah. Dhismayaasha ciyaarahan - calaamad muujinaysa farqiga Faransiiska iyo raaxada. Maanta, machadku wuxuu leeyahay aaladda Lusena Barrier, oo loo yaqaan magaca sharafka khamaarka. Casabigaasi wuxuu leeyahay xaddi badan oo khamaar: Mashiinada 325 iyo jumladaha ciyaaraha 24 ee ciyaaraha Punto Banco, Roulette, Blackjack, craps, iyo kuwo kale. Waxaa sidoo kale jira saddex baarar, saddex makhaayado, banaanbax iyo goobaha shirarka, hoteelka toddoba boqol oo kursi. Si aad u tagto casinos waxay u baahan tahay inaad soo bandhigto dukumenti aqoonsi iyo inaad ka qeyb qaadatid ciyaaraha jadwalka waa inaad marka hore isdiiwaangelisaa.
Calaamadeyn «LE LYON VERT»
Kombiyuutarka «LE LYON VERT» ayaa laga furay 1882, 1991 wuxuu bilaabay inuu ka tirsanaado Kooxda Partouche. Waxay ku taal Lyon. Nidaamkan khamaarka wuxuu ka kooban yahay hoolal khamaar oo aad u weyn, makhaayado iyo hoteel yar. Khadkaan casriga ah sida xarumo kale oo khamaar oo Faransiis ah, waxaa jira tiro aad u tiro badan oo ah qalabka ciyaaraha: poker video, waxaa jira 174 iyo 224 waxay dejiyaan meeraha farsamada. Waxaa sidoo kale jira fursad lagu ciyaaro American iyo Rugta Yurub, Texas Hold'em poker, blackjack iyo ciyaaraha kale ee fursad. Inta lagu jiro fasaxyada, waxaad ku fariisan kartaa makhaayadda, ku raaxeysiga cunnada qurxinta leh.
Casriga Aix-en-Provence, oo loo yaqaan Pasino, ayaa laga furay 1923. Dhismuhu wuxuu noqday mashruuc dib-u-horumarin oo weyn oo magaaladu soo saartay. Mashruucan wuxuu ka kooban yahay guriga khamaarka, isbitaalka kuleylka leh, garoon weyn iyo xadiiqad qurux badan. Casino Pasino wuxuu ciyaari karaa cayaaraha kala duwan ee fursadaha, oo ay ka mid tahay fursad ay ku ciyaaraan mashiinka xargaha, video poker, roulette iyo video, marka lagu daro, noocyo kala duwan oo kaararka ah iyo madadaalo kale. Waxaa si joogta ah loo qabtaa dhaqdhaqaaqyo badan oo madadaalo, oo ay ku jiraan riwaayado iyo bandhigyo kala duwan, jilicsanaan.
SEVEN casino ugu weyn ee Faransiis ah, wuxuu daboolayaa aagagga mitirka labajibbaaran ee 650, waxay u egtahay baaxad weyn, iyo sidoo kale madadaalada iyo qurxinta raaxada iyo qurxinta gudaha. Waxaa la barbar dhigi karaa quruxda dheeman. Waxay loola jeedaa jiil cusub oo ka mid ah xarumaha khamaarka. On gudaha ee fikrada ah casinos saameeyay Sheeko cirfiid Roald Dahl's "Charlie iyo Shukulaatada Shukulaatada". Casino kaliya ma ciyaari karo ciyaaraha fursadaha lacag, laakiin sidoo kale ku raaxeeysan noocyada kale ee madadaalada.
Kantaroolka «Cannes Croisette»
Cannes Croisette oo ku taala bartamaha Cannes ee caanka ah ee Cannes, ayaa leh koox Lucien Barrière. Goobaha guud ee ciyaarta aasaasiga ah waa mitirka labajibbaaran ee 3,000. Qolalka ciyaarta waxaa lagu qurxiyey qaab casri ah. Hoolalka cas casino waxaad ku ciyaari kartaa ciyaaraha sida poker, blackjack, roulette, baccarat iyo makiinadaha dhejiska. Meelaha madadaalada waxaa jira baararka badan, makhaayad gastronomiska ah iyo goob lagu caweeyo. Waxaad qol ka qaadan kartaa qolka hoteelka.
Waa in la yidhaahdaa "Paris" iyo "Eiffel Tower", inta badan wadnaha wuxuu bilaabaa inuu si dhaqso ah u garaaco oo maskaxdana uu sawiro sawiro ah. Maanta CasinoToplists waxay booqan doontaa dhulka jacaylka iyo xorriyadda - Faransiiska. Sidaas darteed, in la yiraahdo erey caan ah, waa shaqadayada maanta "si aan u arko Paris iyo ciyaaraha."
Faransiiska - ereyo yar oo ku saabsan taariikhda iyo juquraafi;
casino khaas ah oo ku yaal meelo damaashaad ah;
Waa mas'uuliyadda Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
Casinos ugu caansan ee Faransiiska:
Club Aviation Club oo Faransiis ah Paris;
Casino Enghien 14 oo ka soo jeeda Paris;
Guriga khamaarka ee Megeve Mont Blanc.
Shan goobood oo Paris ah cinwaanada;
Goobta Faransiiska, iyo taariikh nololeed oo kooban
Faransiiska - waa dal xiiso leh oo ku yaal galbeedka Yurub ayaa soo maray waqtiyo badan oo adag, laakiin waxay noqdeen mid ka mid ah kuwa ugu raaxada badan oo ammaan ah adduunka oo dhan. Magaca buuxa ee dawladda - Jamhuuriyadda Faransiiska. Faransiiska, xuquuqda dadka iyo quruunba si gaar ah dadka. Motto - "Xoriyad, sinnaan, daraasad."
Madaxa dawladda waa madaxweynaha, Francois Hollande, laakiin wax badan oo ka mid ah awoodaha ayaa ra'iisal wasaare Manuel Valls. Maanta, in kabadan 66 milyan oo qof oo ku nool Faransiiska, kuwaas oo 90% - muwaadiniinta dalka. Qeybta Qaranku waa mid midab badan oo kala duwan, inkastoo xaqiiqda ah in Faransiisku uu hareereeyey. Waxaa jira Alsatians, lotaringtsevos, British, Yuhuud, Flemish, Catalans, Basques, Corsicans, Armenians.
Caasimada Faransiiska - quruxbadan Paris, oo sida aad ogtahay, inaad aragto oo aad u dhinto nabad. Taariikhda metro-casriga casriga ah, oo ku taala hareeraha 2.5 dadka, waxay bilaabeen qarnigii III ee qarnigii koobaad. e. Tani waa xarun dhaqameed, taariikhiyan, dhaqaale iyo siyaasadeed, oo leh qurux iyo qurux badan.
Faransiiska ayaa si wanaagsan u tixraacaya khamaarka khamaarka muwaadiniinta iyo martida, ee ku yaal dhul badan oo ah casinos iyo qamaar, laakiin sidoo kale xeerarka ururkooda halkii adag. Aan baadhno.
Casinos iyo Khamaarka Faransiiska
Faransiiska - mid ka mid ah dalalka ugu khatarta badan adduunka, iyo Faransiiska - mid ka mid ah ciyaartoyda ugu dhibka badan. Khamaar badan ayaa halkan ka dhacay.
Marka la eego, inta badan casinos ee adduunka, xitaa canshuurta bixisay maqaalkan sida "ciyaaraha Faransiiska." Mid ka mid ah noocyada roulette waxaa sidoo kale loo yaqaan "French Roulette" (oo sidoo kale loo yaqaanno Roulette European); iyo noocyada kala duwan ee roulette, Faransiiska naimenshee wuxuu leeyahay faa'iidada casino, taas oo aan ku guuldareyn karin inay ku farxaan taageerayaasha ciyaarta.
Sida wadamada yurub ee ugu badan, Faransiiska, ayaa ah qaab gaar ah oo ku saabsan khamaarka. Waxay sharciyaynayaan, laakiin waxaad ku ciyaari kartaa oo kaliya meelaha meelaha gaarka ah loogu talagalay. Casriyeyntu waxay u furan tahay inay ka furto 1942 oo kaliya meelahaas oo leh xaalad degaan ah, laakiin waa in laga saaraa Paris aan ka yarayn 100 km.
Ka hor inta aan sharciga la hirgelin dalka wuxuu ahaa guryo badan oo khamaar, kuwaas oo intooda badan la xidhay. Maanta si rasmi ah ayuu u shaqeeyaa XINUMX casinos, dhammaantood waxaa maamula Wasaaradda Arrimaha Gudaha. Xakamaynta hay'adaha, habka cayaaraha iyo adeegga lagu rakibo wax ka badan halis.
Xal u helidda furitaanka casino cusub wuxuu siinayaa wasiirka gudaha ee gaarka loo leeyahay, laakiin ruqsadda koowaad waxaa lagu soo saarayaa heer degmo, oo ay ansixisay Komishanka Dhexdhexaadinta. MIA wuxuu qeexayaa liiska ciyaaraha ee machadku u doortay dhammaan shaqaalaha oo dhan.
Sharciyada gaarka ah ee 1986 waxaa loo oggol yahay booqashoo loogu talagalay soo galitaanka dumarka. Shaqaalaha looma oggola inay soo qaadaan casinimo si ay u shaqeeyaan lacagta caddaanka ah ama jajabyada, in qaanuunkan la arkay, dhar khafiif ah lagu dhajiyay oo aan lahayn jeebado. Faransiiska, waxaad ka ciyaari kartaa da'da 18. Diiday in la geliyo dadka ku labisan dharka. Khamiis kasta wuxuu leeyahay liis madow, oo u dejisan Schuler, lumana yaryahay (magacyadooda waxay xaq u leeyihiin qaraabada), iyo marti kale oo aan la jeclayn.
Kantaroolka Faransiiska maaha kaliya degmo maxalli ah, laakiin sidoo kale waa il adag oo dakhli ah. Sannad kasta, miisaaniyadda waxaa la siiyay boqolaal malyan oo euro ah. Canshuurta kobaca ee xarumaha, faa'iidada ka badan tahay 9.5 million euros, waa boqolkiiba weyn - 80. Mashiinnada oo kaliya ayaa sameeya 50% dakhliga, kaararka - ku saabsan 40%, inta kale waxay ku dhacdaa miiska roulette.
Casinos ugu caansan ee Faransiiska
In kasta oo si rasmi ah looga dhigo Paris, waxaa jira casino, waxaa jira weli kooxda Dammaanadda Duulinta de France , taas oo u ogolaatay ciyaaraha qaar, sida poker, baccarat iyo backgammon. Tani waa mid ka mid ah goobaha ugu raaxeysan ee dalka, oo laga furay 1907. Had iyo jeer waa in ay si adag u hoggaansamaan xeerka dharka. Si aad u hesho gudaha, hubi inaad ka gudubto koontaroolka wajiga, oo ay ku jiraan jeega dharka, ku rid kaarka naadiga. Waxaad sidoo kale ku wareejin kartaa martiqaadaha kaarka. 2005 waxaa ka dhacay World Poker Tour, sharafkani waa kan ugu fiican ee ugu fiican.
Kala duwanaansho kale - casabadan Enghien , waa kaliya 14 km oo Paris ah. Engen waa meel aad u qurxoon oo ku taal xeebta xeebta, saacadda guriga saacadda laga bilaabo 10 am ilaa 4 habeenkii. Waa xaflad weyn oo leh makhaayadaha, hudheelada, tiyaatarka iyo naadiyada isboortiga. Waxay halkan yimaadaan si ay u cayaaraan roulette, ciyaaraha kala duwan ee noocyada iyo noocyada 450 ee mashiinnada slot.
Waxay leedahay qamaar gaar ah oo khamaar leh Megève , oo ku taalla Mont Blanc. Bandhigaas wuxuu si kalsooni leh u hayaa hoggaaminta marka la eego dakhliga. Tani maaha mid la yaab leh, sababtoo ah waxay ku hareereysan dabiiciga quruxda badan, maaha oo kaliya fasax qamaaris ah, laakiin sidoo kale waa fursad ay waqti ku qaataan diskooga, barafka piano ama makhaayadda.
De Deauville Barrière - casino ugu wanaagsan, oo ku yaala xeebta degaanka. Waxay ku taal meel ka baxsan xeebta hiddaha ee filimka "Man iyo Woman" Lelouch. Meeshan waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan Faransiiska.
Eiffel Tower. Cinwaanka: Champ de Mars, 5 Avenue Anatole France. Waa calaamad u ah Paris iyo Faransiiska - oo dhan ayaa sheegay.
Triumphal Arch. Cinwaanka: Goobta Charles de Gaulle. Qeybta qadiimka ah ee qadiimka ah, oo la dhisay by bidix Napoleon si loo aqoonsado guulaha waaweyn.
Louvre. Goobta: Palais Royal. Mid ka mid ah matxafyada waaweyn ee Yurub, oo ku yaala Palace Royal.
Notre Dame de Paris. Cinwaanka: 6 Parvis Notre-Dame - Meesha Jean-Paul II. Wadnaha ruuxiga ah ee Parida iyo Basilica Katrina oo qurux badan.
Luxembourg Gardens. Cinwaanka: 6e Arrondissement. Goobo dhaadheer iyo dhismo park, oo ku jiifa 26 hektar.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Faransiiska iyo Faransiiska
Magaca wadanka "Faransiiska" wuxuu leeyahay asal ahaan Jarmal, wuxuu ka yimid magacyada qabiilooyinka Franks degganaa degaanka. Inkasta oo dadka oo dhan ay ku hadlaan luqadda oo ay leeyihiin asal ahaan Roomaanku inta badan Gallo-Roomaanku, magaca ayaa yimid sababtoo ah luqada Jarmalka.
Faransiiska, qalcadaha ugu weyn adduunka - 4969.
Waxay ahayd gudaha Faransiiska oo soo bandhigtay filimada, baaskiilada, fiyuuska, chanson, Gothic.
Tan iyo 2011, radiyaha Faransiiska iyo Telefishinka ayaa si rasmi ah loo mamnuucay in lagu sheego Facebook iyo Twitter.
Waqtiga qadada, Faransiiska had iyo jeer waxay u adeegeen khamri.
Faransiiska - Xarunta Beeraha Yurub
Ragga Faransiisku waa hadal, waxay dooranayaan naagahan oo kale oo aad kala hadli karto.
Faransiiska, canshuurta ugu badan ee Midowga Yurub.
Inta badan dadka Faransiisku waxay doonayaan inay ku noolaadaan Kanada.
Faransiiska khariidadda Europe
0.1 Liiska Saacadaha 10 Faransiiska Online Casino
1 Khamaarka Faransiiska
1.0.1 Goobta Faransiiska, iyo taariikh nololeed oo kooban
1.1 Casinos iyo Khamaarka Faransiiska
1.1.1 Casinos ugu caansan ee Faransiiska
1.1.2 Soojiidashada Paris
1.1.3 Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Faransiiska iyo Faransiiska
1.1.4 Faransiiska khariidadda Europe